Isebenza kanjani i-thermometer ye-mercury? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izinsimbi Zomkhathi, Isimo sezulu
Ama-thermometer eMercury abekhona isikhathi eside futhi nanamuhla. Cishe kuzo zonke izindlu kwakukhona i-thermometer ye-mercury. Ngokuhamba kwesikhathi ziyekiwe ngoba kutholakele ukuthi kungaba yingozi enkulu uma yephuka. Baningi abantu abangazi kahle isebenza kanjani i-thermometer ye-mercury. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi nayo ivinjelwe njengoba inganxephezeli ngenxa yobungozi bayo nobungozi bayo lapho uyisebenzisa.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokukhombisa ukuthi i-mercury thermometer isebenza kanjani.
1 Izici eziyinhloko zama-thermometer e-mercury
2 Isebenza kanjani i-thermometer ye-mercury
3 Ungayifunda kanjani i-thermometer ye-mercury
4 Ezinye izindlela zala ma-thermometer
Izici eziyinhloko zama-thermometer e-mercury
Kuyinsimbi yokukala izinga lokushisa equkethe isibani okuvela kuso ithubhu elincanyana elenziwe ngengilazi. Ngaphakathi kwebhalbhu kune-mercury yensimbi. Le nsimbi ethile ikhethiwe kusukela ivolumu yayo ishintsha ngokuya ngezinga lokushisa. Yena Ithuluzi linezinombolo ezimaka amanani okushisa. Ngokuya ngalawa manani, ivolumu izokhuphuka noma yehle. Le nsimbi isetshenziselwe ukukwazi ukuba nendawo enkulu lapho iguqula ivolumu yayo futhi iveze kangcono idatha.
Njengoba kunikezwe ubulula nokusebenza kwayo uma kukhulunywa ngamazinga okushisa, yaba ithuluzi elisabalele kakhulu emhlabeni wonke. Yena Intengo ye-thermometer ye-mercury bekungabizi kakhulu ngabantu bonke. Isayensi efunda izinga lokushisa elaziwa ngokuthi yi-thermology yathuthuka kakhulu ngokubonga kwi-mercury thermometer. Ububanzi bamazinga okushisa angabamba bukhulu impela.
Isebenza kanjani i-thermometer ye-mercury
Lapho sesazi ukuthi yiluphi lolu hlobo lwethuluzi ake sibone ukuthi isebenza kanjani igxathu negxathu. Ama-thermometer eMercury anezinombolo ezibonisa amanani okushisa. Lezi zinombolo zilinganiswa ngomugqa omncane kakhulu odwetshiwe phakathi nendawo. Lo mugqa nguyena ophethe ukukhombisa ukubaluleka kwezinga lokushisa elilinganiswayo. Uma sifuna ukuyisebenzisa ukwazi ukushisa komzimba, into ejwayelekile kakhulu ukubeka isibani ngaphansi kolimi, engxenyeni noma ekhwapheni. Ngale ndlela, singabheka umkhuhlane ngokukala izinga lokushisa komzimba.
Ake sibone isinyathelo ngesinyathelo ukuthi i-thermometer ye-mercury isebenza kanjani:
Ukuhlanza isibani: Okokuqala, hlanza isibani esisengxenyeni yensimbi ye-thermometer ngephedi kakotini ofakwe otshwaleni obulala amagciwane. Ngale ndlela, singabulala amagciwane engxenyeni ezoxhumana kakhulu nomzimba wethu.
Sisebenzisa ngamandla i-mercury thermometer: Ukwenza lokhu, kufanele sikusebenzise ohlangothini oluphambene nesibani. Ngenxa yalokhu kuhamba singenza noma iyiphi insalela ye-mercury esele ihle futhi siqinisekise ukuthi izinga lokushisa elibonisiwe lilungile.
I-thermometer sibeka ekhwapheni: isibani kufanele sibe phakathi nendawo kwekhwapha ukuze sikwazi ukukala amanani okushisa kahle. Okulandelayo, sishiya ingalo ethangeni ngaphandle kokuyihambisa ngenkathi sivumela izinga lokushisa ukuthi likhuphule i-mercury futhi lihlole ukuthi unemfiva yini.
Silinda cishe imizuzu emihlanu: cishe isikhathi esithathayo ukuthi i-mercury ikhuphuke futhi ikhombise izinga lokushisa komzimba. Kubalulekile ukubeka isikhathi lapho sino-thermometer kahle, ngoba ngale ndlela sizokugwema ukukususa ngaphambi kwesikhathi.
Yinyakazise futhi: Ukwehlisa i-mercury futhi, kufanele sinyakazise i-thermometer futhi. Ekugcineni, inhloso ukuyigcina kahle esimweni sayo ukuze ingaphuli. Siyazi ukuthi i-mercury metal iyingozi futhi ingilazi ayisebenzi. Kuyathakazelisa futhi ukuyikhipha amagciwane ngotshwala ngaphambi kokuyigcina.
Ungayifunda kanjani i-thermometer ye-mercury
Akudingeki nje ukuthi wazi ukuthi i-mercury thermometer isebenza kanjani, kepha futhi wazi nokuthi ungayichaza kanjani idatha. Ukuze wenze lokhu, kufanele ufunde ukuyifunda kahle. Ngemuva kokulinda imizuzu emihlanu ukuthi izinga lokushisa likhuphuke, sikhipha i-thermometer bese sibheka umugqa ophakathi nendawo. Yilo mugqa osisizayo okhombisa ukushisa komzimba. Ngokuya ngenani abanalo, siyazi ukuthi sinomkhuhlane noma cha.
Kubalulekile ukuhambisa i-thermometer ngobumnene ngoba uma ulayini we-mercury ungabonakali kahle, kufanele uhanjiswe. Uma ulayini weqa ama-degree angama-37 siyazi ukuthi sinomkhuhlane. Uma kuphela kudlula okweshumi okumbalwa asikho isidingo sokukhathazeka. Uma izinga lokushisa lisondele kuma-degree angama-40, kungcono ukukala kabusha izinga lokushisa noma uye kudokotela ngokushesha.
Isebenza Kanjani I-thermometer ye-Mercury: Okufanele Ukwenze Uma Iphuka
Enye yezinto ezibalulekile ukwazi ukuthi yini okufanele uyenze lapho i-mercury thermometer iphuka. Uma ngenxa yanoma iyiphi ingozi iphuma esandleni sethu iwele phansi, iphule ingilazi, kufanele sibe nenqubo yokusebenza. Umqondo uwukuthi faka umoya imvelo yonke ngangokunokwenzeka ukugwema ukuphefumula umusi onobuthi. Le nsimbi inobuthi uma iphefumulelwa ngaphakathi futhi ingadala ukulimala kwengqondo, izinkinga zesikhumba, izinkinga zesisu, njll.
Ngaphambi kokuqhubeka nokuqoqa amabhola amancane e-mercury akha lapho i-thermometer iphuka, kumele sigqoke izifihla-buso namagilavu ​​ukuze sizivikele hhayi ukuphefumula umhwamuko. Futhi, noma yikuphi ukuxhumana nesikhumba kungaholela ezinkingeni ezimbi kakhulu. Ngakho-ke, okuhle ukuthi kuqoqwe futhi kuhlolwe kahle ukuthi wonke amaparele e-mercury aqoqiwe.
Akunconyelwe nakancane ukuthi ukhiphe yonke i-mercury endlini yangasese, ngoba ingcolisa ngaphezu kwamalitha ayi-1000 amanzi ngokungadingekile.
Ezinye izindlela zala ma-thermometer
Kunezinye izindlela ezithakazelisa kakhulu ku-thermometer ye-mercury, ngoba ayitholakali ngokuthengisa namuhla. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo eziyinhloko:
I-thermometer yedijithali: Yisinye esisetshenziswa imihlahlandlela efanayo ne-thermometer ye-mercury.
I-thermometer ye-infrared: yenza ukufundwa kwezinga lokushisa ngemisebe ekhishwa isikhumba. Azinabungozi empilweni.
Ama-thermometer wezingane: Angama-thermometer ohlobo lwe-pacifier esingawasebenzisa ukwazi ukuthi izingane zethu zinomkhuhlane.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi i-mercury thermometer isebenza kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Isebenza kanjani i-thermometer ye-mercury?